लाइसेन्स निकाल्न फेरी आयो नयाँ नियम, अहिले आवेदन दिंदा कहिलेसम्म आइपुग्ला ? – Ujyaalo Patrika
लाइसेन्स निकाल्न फेरी आयो नयाँ नियम, अहिले आवेदन दिंदा कहिलेसम्म आइपुग्ला ?
सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) पाउन सर्वसाधारणले लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। कोरोनाभाइरस महामारीका कारण १० महिना जति चालक अनुमति पत्र दिने प्रक्रिया रोकिएको थियो।
Previous कति वर्ष देखि ‘यौ’ न कौतुहलता हुन्छ ! – कुन उमेरका युवतीमा ‘यौ’,न चाहना बढी हुन्छ ।
Next लाइसेन्स छैन ! खुशीको खबर : अब ट्रायल पुरै पास गर्न नपर्ने ६० नम्बर आए लाइसेन्स पाइने !